Faahfaahin Laga Helayo Madaafiic Lagu Garaacay Saldhiga Ciidamada Kenya. – Bogga Calamada.com
Faahfaahin Laga Helayo Madaafiic Lagu Garaacay Saldhiga Ciidamada Kenya.
February 13, 2018 4:09 pm Views: 73
Wararka ka imaanaya dhulka Kenya xooga kaga heysato Somalia ayaa sheegaya in weerar madaafiic ah lagu qaaday deegaanka Ceel Raam oo hoos yimaad deegaanka Ceel-Waaq halkaas oo ay ku suganyihiin boqolaal katirsan melleteriga Kenya ee duullaanka kusoo qaaday dalka Soomaaliya.
Xalay saqdii dhexe ayay Shabaabul Mujaahidiin madaafiic ku garaaceen saldhiga ciidamada Saliibiyiinta Kenya ee deegaanka Ceelwaaq Kenya oo saldhig melleteri ay ku leeyihiin ciidamada Melleteriga wuxuuna deegaankan hoos taga magaalada Mandheera.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in saldhigga melleteri ee Caal-raam uu duqeyn ba’an kala kulmay ciidamo taabacsan Xarakada Shabaabul Mujaahidiin sida ay sheegeen dadka deegaanka, madaafiicda oo ahaa hoobiyaal ayaa ku dhacay gudaha saldhigga oo ay ku suganyihiin melleteriga Kenya.
War kasoo baxay Xarakada Mujaahidiinta Al Shabaab ayaa lagu sheegay in duqeynta lagu qaaday saldhigga Ceel-Raam uu sababay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray ciidamada Kenya balse xarakadu si xadidan uma sheegin khasaaraha soo gaaray melleteriga Kenya.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in ay maqleen jugta madaafiic culus oo ku hoobanaysay saldhigyada ciidamada Kenya, isbuucan gudihiisa ayaa weerar midkaan lamid ah lagu qaaday saldhig ciidamada Kenya ku leeyihiin deegaanka Katulu waxaana weerarkaas ka dhashay khasaaro balse dowladda Kenya ma sheegin heerka uu khasaaruhu la egyahay.